I-Wholesale 17oz 500ml Isitsha sengilazi Isitsha sekhandlela esinefektri yesivalo sokhuni/soqalo kanye nabakhiqizi |Winby
17oz 500ml Isiqukathi sesitsha sengilazi Isitsha sekhandlela esinesivalo sokhuni/soqalo
Uma ufuna ukwenza ikhandlela lakho, inkomishi yekhandlela lengilazi iyisinqumo esihle esifanele umnikazi wamakhandlela kunamathini.
Samukela ilogo eqoshiwe esivalweni kanye nelebula elenziwe ngendlela oyifisayo enkomishini.
Umbala: singenza umbala ngokwezifiso.
Ingilazi eyisithwathwa ye-amber enkulu engenalutho izitsha zesitsha sekhandlela zokwenza amakhandlela
Inzuzo mayelana nekhwalithi yayo
Mayelana nekhwalithi yayo, ingilazi ewugqinsi futhi eqinile eyakhelwe ukwenza amakhandlela, kodwa futhi yenza izimbiza zokugcina ezimangalisayo zesimanje.Elegant futhi classy.Izothambisa amakhandlela anombala ukuze inikeze isimo esizolile kakhulu.
izivalo zokhuni zesitsha sekhandlela lengilazi ye-amber
Isivalo sokhuni sengeza ukusikisela okulula, okuthandekayo, le ngqayi yekhandlela enephunga elimnandi iyinto ebalulekile oyofuna ukuyigcina iseduze.
Ukwenza ngokwezifiso ngesitsha sekhandlela lengilazi
Ngokuya ngezindikimba nezitayela ezahlukene, siklame imibala eminingi nosayizi abahlukene bemikhumbi yekhandlela, njenge-matte black, matte transparent, emhlophe, ebomvu, eluhlaza okwesibhakabhaka, njll.Ungahlala uthola oyithandayo.Ngakho ungakhetha ukuthi uthanda umbala ekhadini le-pantone, sizokwenzela ireferensi kuqala.
Zenzele ikhandlela lakho ngalezi zimbiza ezinhle zengilazi bese wengeza iphunga nombala oyifunayo, kungaba isipho esihle kakhulu kubangani bakho nemindeni.
Le mbiza yekhandlela yenziwe ngenkomishi yengilazi eyisithwathwa nesivalo soqalo, futhi inokubukeka okuhle nokuhle futhi ingasebenza kahle ekwenzeni amakhandlela.Ingenza futhi amakhandlela amahle anephunga elimnandi ekhaya.
Imininingwane yale mbiza yesibambi sekhandlela lengilazi
Okubalulekile Inkomishi yengilazi efriziwe kanye noqalo noma isivalo sokhuni
Ilungu Isivalo sokhuni noma isivalo se-bamboo, i-logo ingaqoshwa esivalweni
Isevisi Custom/ODM OEM/isevisi yesampula
Okwedlule: Black frosted glass ikhandlela iziqukathi izitsha nge lid
Olandelayo: Colorful Umdwebo ingilazi ikhandlela jar nge lid
ingilazi engenalutho yekhandlela
esiyingqayizivele inkambiso glass jar ikhandlela elinephunga elimnandi
frosted inkambiso logo aromatherapy glass ikhandlela-B...
Izivalo zensimbi ezenziwe ngokwezifiso zikanokusho ezinosayizi ohlukene...
Ikhandlela lesici esinephunga elimnandi
ikhandlela elisha lokuhlobisa
amawikhi kakotini ngokwezifiso amakhandlela anephunga elimnandi